Madaxda diimaha ee Tansaaniya oo ku baaqay dulqaad kadib rabshadihii ku salaysnaa diimaha kala duwan - Sabahionline.com
Madaxda diimaha ee Tansaaniya oo ku baaqay dulqaad kadib rabshadihii ku salaysnaa diimaha kala duwan
Waxaa qoray Deodatus Balile oo Daarusalaam jooga
Madaxda diimaha ee Tansaaniya ayaa dhalleeceeyay shaqaaqooyinka sii kordhaya ee ka dhaxeeya Kiristaanka iyo Muslimiinta taas oo galaafatay nolosha sadex madax diimeed bishii Febraayo, waxyna ku dhaareteen in labadan shacab ay isu soo dhawaynayaan.
Qaar ayaa qaba in wacdiyada aan idmaneeyn ee ka baxa masaajida iyo kaniisadaha ay yihiin sababta keentay qalalaasaha socda ee ka dhaxeeya dadka kala diimaha ah. Kor, rag ku tukanaya masaajid ku yaala Darusalalaam. [Mwanzo Millinga/AFP]
Hoggaamiye-diimeedyada iyo dhallinyarada Kwale County oo dhiiri galiyay dulqaadka iyo midnimada
Febraayo 11-keedii, ayaa khilaaf labada koox ee wada dagan Buseresere iyga oo isku haysta dhinaca xaqa u leh gawraca xoolaha sababayin madaxa laga gooyo Wadaadka Mathayo Machila, oo 45 jir ahaa, iyo dhaawaca muwaadiniin kale oo dhowr ah. Xukuumadda ayaa wixii intaa ka dambeeyay samaysaygudi ka kooban dadka kala diimaha ah si ay dib ugu eegaan qawaaniinta gawraca.
Dhinaca Zanzibar, ayaa rag hubaysan oo aan la garanayn waxa ay Baaba Evarist Mushi kudileen kaniisadiisa horteeda bishii Febraayo 17-keedii, iyada oo Febraayo 23-deediina, Cali Khamiis Cali, oo 65 jir sheekh Muslim ahna ay dad aan la aqoon ku tooriyeeyeen beertiisa qunbaha.
Weerradada Febraayo dhacay, waxay daba socdaan qalalaaso bilawday sannadkii hore. Maalintii Dhalashada Masiixa, ayay rag hubeeysan toogteen oo si xun u dhaaweceen Baaba Ambrose Mkenda isaga oo gurigiisa ku soo noqday kana yimid kaniisadda, Noofember-na, dad soo weeraray sheekha Muslimka ah ee Fadhil Soraga ayaa aashito kaga daadiyay wajiga iyo laabta.
Sheekha u sarreeya Tansaaniya Mufti Issa Bin Shaaban Simba ayaa sheegay in wadanku u baahan yahay isku dulqaadasho xagga diimaha ah.
"Waligeen waannu isku dul-qaadan jirnay, laakiinse hadda xagee dulqaadkii ka baxay?" ayuu u sheegay Sabahi. "Xukuumadda, hoggaamiyayaasha diinta iyo siyaasiyiintuba waa in ay dadka ka wacdiyaan nabadda, jacaylka iyo wada noolaanshaha."
Wuxuu sheegay in Tansaaniyaanku ay ka fogaadaan iska aargoosiga sababta oo ah taasi dalka ayay fitno galin kartaa, isaga oo intaas ku daray in booliiska looga baahan yahay in uu baadho falal-dambiyeedyada isla markaana kuwa arimahaas maleegaya lala tiigsado sharciga.
Kaaliyaha Waadadka kaniisadda Archdiocese ee Daarusalaam Eusebius Nzigilwa ayaa sheegay in dad ka tirsan xukuumadda ay ku fashilmeen in ay shaqadooda si fiican u qabsadaan, taas oo sababtay rabshadaha hadda socda.
Wuxuu sheegay in madaxda qaarkood aysan si fiican u fulin sharciga, qaanuunka iyo xeerarka, taas oo sababtay in dadka qaarkood ay abaabulaan fitno. "Xalka ugu danbeeya waa in sharciga loo hoggaansamo," ayuu u sheegay Sabahi.
Simba ayaa sheegay in madaxda diimaha ee labada dhinac ay isu yimaadeen ayna sameeyeen gole toban qof ka kooban oo la magac baxay Golaha Nabadda oo loo xilsaaray wax ka qabshada rabshadaha iyo isu soo dhawaynta labada bulsho. Dadaalka dadka diimaha kala gadisan wuxuu eegi doonaa arimaha haysta labada bulsho ee dalka waxayna doonayaa in ay la jaan-qaadaan dadaalka xukuumaddu ay waddo ee wax looga qabanayo qalalaasaha socda.
Shacabka oo u doodaya midnimo
Yusufu Halimoja, 79, oo ah hawlgab macalin dugsi sare, ayaa u sheegay Sabahi in siyaasiyiinta iyo tayi xumida hoggaanka ay tahay sababta ugu wayn ee qalalaasaha wadanka ka taagan.
""Midnimadeennu tijaabo wayn ayay ku jirtaa," ayuu u sheegay Sabahi. "Waxaan u malaynayaa qaar hogaamiyayaasha ka mid ah in ay arintan ka danbeeyaan si ay u fuliyaan ajandayaashooda ah in ay Zanzibar ka gooyaan midawga. Tani waa siyaasad raqiis ah."
Halimoja ayaa sheegay in madaxda sare ee xukuumaddu aysan arintan wax fiican ka qabananynin oo ayan si caam ah u dhalleecayn rabshadaha, waana in ay qabtaan kulamo caam ah.
Salum Said Hamad, oo 46 jir ah degana Mchambawima oo Zanzibar ku taala ayaa sheegay in wacdiyo aan haboonayn oo ka yimaada kaniisadaha iyo masaajida ay tahay asalka khilaafka hada taagan.
"Hadafkoodu waa deeqa [lacageed]," ayuu u sheegay Sabahi, isaga oo intaas ku daray in madax badan oo xagga diimaha ah ay doonayaan in dalku uu rabshado galo si ay u soo jiitaan taageerayaal badan oo ay waydiistaan tabarucaad lacageed.
"Mararka qaarkood waxaan dhagaystaa waxa ay ku wacdinayaan wanaan ka naxaa. waxaan u baahannahay in aan dib isugu noqonaa, oo hadii ay suuragal tahay, aan la soconnaa waxa madaxa diintu ay dadka ku wacdiyaan," ayuu yidhi.
Wuxuu sheegay in madaxada Muslimiinta iyo Kiristaankuba ay tahay in ay dadka ku wacdiyaan "midnimo, nabad, jacayl, wada noolaansho iyo xasillooni", laakiinse inta badan xaaladdu sidaas ma aha," ayuu yidhi.
Honest Ngowi, oo ah macalin dhaqaalaha ka dhiga Mzumbe University, ayaa u sheegay Sabahi in farqiga u dhaxeeya dadka saboolka ah iyo kuwa hodanka ah ee Tansaaniya uu kordhayo uuna noqon karo mid asal u noqda khilaafka.
"Xukuumaddu waa in ay dhistaa nidaam shaqaynaya oo ah xagga waxbarashada iyo dhaqaalaha kadib waxan [dhibaatada] ah oo dhan way dhammaan doonaan," ayuu u sheegay Sabahi.
Ngowi ayaa sheegay in marka dadka lagu mashquuliyo wax uu dakhli ka soo galiyo, ayan heli doonin wakhti ay kaga qayb-galaan rabshado.
Maamulka oo heegan ah
Taliyaha Booliiska Zanzibar Mussa Ali Mussa ayaa sheegay in booliisku uu wado baadhitaan buuxa oo ku saabsan rabshadaha.
"Ma hubno meesha ay ka imaanayaan rabshaduha iyo dilitaanka," ayuu u sheegay Sabahi. "Si fiican ayaa u diyaar garawnay, saaxiibadeenna gudaha iyo dibadaba-na waxan weydiisannay in ay arintan naga kaalmeeyaan."
Mussa ayaa sheegay in bilaysku ku xad-gudbi doonin xuquuqda banii'aadamka, laakiinse dhagax kasta aan rogi doonno sidii aan ku heli lahayn dadka dhibaatada maleegaya.
Wasiirka Xidhiidhka Bulshada iyo Isku-duba-ridka Stephen Wassira ayaa u sheegay Sabahi in xukuumaddu ay si hoose ula socoto rabshadaha ayna wax ka qabnayso mujrimiinta falalkooda ku qarinaya hadallada diiniga ah.
Wassira ayaa sheegay in arintan sida kadiska ah ku qaraxday ee ah dilalaka madaxda diintu ay xukuumadda ku khasabtay in si dhab ah ay u baadho sababaha arimahan keenay iyo xalka suuragalka ah ee lagu joojin karo rabshadaha.
April 25, 2013 @ 03:27:19PM
Dadka lagu tuhmo inay colaada diimeed abuurayaan waa in si sharciga waafaqsan xabsiga loo dhigaa, waana in la raacaa nidaamka maxkamadaha. Waa in cadaalada loogu dhaqmaa si aan eexasho ku jirin oo xaga xukuumadana uusan cadaadis ka imanin marka wax laga qabanayo dadka la tuhunsanyahay.
Waa in xukuumadu dadaal la timaadaa oo ay si miyir leh wax u qabataa.
Hogaamiyayaasha sar-sare waa inay iyaguna war-bixinohoodu noqdaan kuwo aan diin ku salaysnayn ama cabso uun ku koobnayn.
Waa in hogaamiyuhu uu noqdaa qof dadka saamayn kara, waana inuu lahaadaa awood uu wax ku amro.
April 2, 2013 @ 04:46:34PM
Muslimiintu waa inay ogolaadaan inay la midoobaan kiristaanka, sidaasaana ugu wacan.
March 12, 2013 @ 02:06:50AM
Xaqiiqadii waa la qariyay, waayo dadka dhintay ee warkan lagu sheegay qaarkood kumaysan dhiman dhibaatooyinka diimeed ee dhacay, balse waxay u dhinteen sababo kale. Markaa waa in la sameeyaa baadhitaan buuxa, waana in natiijooyinka dadwaynaha loosoo bandhigaa, anigu sidaas ayaan qabaa, oo waxan leeyahay dhacdooyinku dhamaantood salka kuma hayaan ismaandhaaf diimeed.
feisal fard hard
March 5, 2013 @ 03:04:47AM
Wadaadada dhaleeceeyay rabshadahan hadana dadka ka codsaday inay fasax u qaataan faafinta diintoda waxaan waydiinayaa goormay diinteena ama caabudida ilaaheenu uu noqday shay u baahan fasaxaad in loo qaato? Taa macneheedu ma waxa weeyaan waa in fasaxaad loo qaato salaada iyo xalqadaha wada tashiga? Wadaadada waxaan leeyahay maxaad ugu dadaalaysaan inaad raali galisaan yuhuuda? Ma waxaasuu islaamku idin baray?
March 4, 2013 @ 09:29:35PM
Dadka kiristaanka ah waa in loo fasaxaa inay qalaan xoolohooda sida muslimiintaba loogu fasaxay.
March 4, 2013 @ 07:45:34PM
Nabadu waa shay Tanzania muhiimad u ah, markaa waa in aynu nabada adkaynaa, waana in ay caruurteenu nabad helaan oo ay ilaaliyaan nabadaas. Hadaan ka hadlo arrinka diinta, waxaan jecelahay inaan dhaho waa in aynu daafacnaa diinteena oo waa inaynu ku daafacnaa waxbarasho diimeed oo dadka aynu siino, waayo waxaa jira dad badan oo diintooda bedela. Hadii aad qof bini’aadam ah wax barto, waxaa dhab ah inuu diintii badali doono iyadoo aan cidna la dilin. Sidaa awgeed waa in midkeemba midka kale uu wax u sheegaa si dadku ay u raacaan diinta wacan oo aysan isu dilin. Ilaahay halaga cabsado.
March 4, 2013 @ 02:22:57AM
Waxaan rabaa in doorashooyinka Kenya ay noqdaan kuwo nabad ah oo aan wax colaad ahi ka dhicin. Ilaahay ha barakeeyo Kenya iyo doorashooyinkaba. Aamiin.
March 3, 2013 @ 04:08:26PM
Waxaad ka hadlaysaan xoojinta midnimada iyo isku duubnaanta, laakiinse ka warama sheikh Ilunga, kaasoo si cadaan ah dadka ugu guubaabiya inay laayaan baadariyada iyo wadaadada kiristaanka ah?
RICHI WA RICH
March 3, 2013 @ 09:37:58AM
Anigu ma arko sabab keeni karta inay dadku isku dilaan qaliinka xoolaha oo midkoodba midka kale dilo. Hadii ay sabab noocaas ahi jirto, waa in markaa dadka kiristaanka ah loo ogolaadaa inay qalaan xoolohooda, muslimiintana loo ogolaadaa inay qalaan xoolohooda, markaa ma jiri doonto sabab dambe oo loo dagaalamaa.
March 2, 2013 @ 12:29:43AM
Anigu waxaan muslimiinta ku boorinayaa inay xasiloonaadaan, waxaanan leeyahay dadkaygoow nacaybka iyo cabashada iyo cadhadu meelna ina gaadhsiin maayaan.